၂၀၂၀ ဇွန်( ၆ ) လ ပိုင်း မှ စ၍ သင့်ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ ..(မိတ်ဆွေေ တွ ကိုလည်း မျှဝေပေး လိုက်ပါအုံး…) – Na Pann San
၂၀၂၀ ဇွန်( ၆ ) လ ပိုင်း မှ စ၍ သင့်ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ ..(မိတ်ဆွေေ တွ ကိုလည်း မျှဝေပေး လိုက်ပါအုံး…)
Na Pann San W | June 2, 2020 | Astrology | No Comments
သင့် နာမည် ၊ဂုဏ် သတင်း အောင်မြင်ကျော်ကြား ၊ ကြီးပွား ဖို့ ဒီလမ်းကြောင်း​တွေ ပေါ်နေပြီလား…? သင့်မိတ်ဆွေကော….?
ဤ လ မ်းကြောင်း အားအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်း ဟုခေါ်ပြီး လက်သူကြွယ်၏ခြေရင်း တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်ခုံ အပေါ် သို့ ထိုးတက်သွားသော လမ်းကြောင်း လည်းဖြစ်သည် ။ ကံလမ်းကြောင်း လည်း ကောင်းမွန်နေ မည် ဆိုပါက သင့်အားဂုဏ်​ သတင်းကျော်ကြားခြင်း ၊ အောင်မြင်ကျော်ဇောခြင်း တို့ ကို အာမခံချက်ပေး မည်​ဖြစ်ပေ သည် ။
သင့်ကံကြမ္မာ အဆိုးအကောင်းကို ဒါလေးဖတ်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ
ထို လမ်းကြောင်း အား မှန်ကန်စွာ ဖတ်နိုင်ပါ ကအောင်မြင်ပျော်ရွှင်မှုရှိ/မရှိ ၊ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်းရှိ/မရှိ ၊ ချီးမြှင့်မြှောက်စား ခံရခြင်း ရှိ / မရှိ ၊ သြဇာတိက္က မရှိ / မရှိ၊ ဓနဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းရှိ/မရှိ၊ ဆွဲဆောင် နိုင်မှုရှိ/မရှိ၊ ပညာ-အတတ် ပညာဖြင့် အသက်မွေးရခြင်း ရှိ/မရှိ၊ စာပေ အနုပညာဖြင့် ကျော်ကြားမှု ရှိ/မရှိ၊ နာမည်၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ ပရိသတ်နှင့်လုပ်ကိုင် စားသောက် နိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ၊ အထွဋ် အထိပ်ရောက်/မရောက် စသည် ဖြင့်သိနိုင် ပါတယ်။
ယခုဖော်ပြထားသော ပုံကား လက်ကောက် ရစ်​ပေါ်မှ ထွက်ပေါ်လာသောအောင်မြင်ရေး လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီး လက္ခဏာရှင်အား မိမိ နေထိုင်ရာ အရပ်၌ပင်​ အများ၏ကြည်ညိုလေးစား ခံရစေခြင်း၊ သြဇာအာဏာရှိစေခြင်း၊ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးစေခြင်း၊ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာစေခြင်း၊ ပါရမီရှင် ဖြစ်စေခြင်း၊ ကျော်ဇောထင်ရှားစေခြင်း ၊ ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူး နာမည်ကောင်းတို့နှင့်ပြည့်​စုံခြင်း တို့ အားပေးစွမ်း မည်​ဖြစ် ပါသည် ။
” အင်္ဂဝိဇ္ဇာ နည်း အရ သင် .. ဘယ်အလုပ် နဲ့ ကြီးပွား တိုးတက်မလဲ “
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ (၇) နေ့ သားသမီးများအတွက် တပတ်စာ ဟောစာတမ်း(၈.၃.၂၀၂၀ မှ ၁၄.၃.၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆရာမင်းသိင်္ခ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ( ၃၁.၅.၂၀ မှ ၆.၆.၂၀ ရက်နေ့ အထိ )